musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Hutano Hwepasi rose: Nyika Itsva Mushure meCOVID
Anopfuura gore kubva pakatanga denda reCCIDID-19, nyika iri kutora zvidzidzo zvakadzidzwa kubatsira kupora kwepasirese uye kudzivirira zvikanganiso zvakafanana kuti zvisaitwe zvakare munjodzi dzehutano dzemangwana dzisingadzivisiki.
Hutano: Sarudzo Yezvematongerwo enyika - Sainzi, Solidarity, Solutions, ichangoburwa munhevedzano yemazita akagadzirwa nekubatana neWorld Health Organisation, inofunga nzira yekudzivirira zvakanyanya nharaunda yepasirese kubva mukutadza kunoonekwa panguva yedenda uye kutsvaga mhinduro dzakavakirwa musainzi iyo. shandira vose. Kudhindwa kwekutanga munhevedzano kwakadaidzira kuvharwa kwehutano hwepasirese, nepo yechipiri yakadana vatungamiriri venyika kuti vabatane mumhinduro yavo kuCOVID-19.
Semuzvinyorwa zvakapfuura, kuburitswa kunoratidza zvinyorwa zvebespoke kubva kumutsara une mukurumbira wevanyori. Vanosanganisira Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-general weWHO, Amina J Mohammed, mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations, uye Right Honourable Gordon Brown, mumiriri weWHO pamari yezvehutano pasi rose uye aimbova mutungamiriri weUnited Kingdom.
Chikamu che'Solidarity' chinoongorora mari mune ramangwana rekuchengetedza hutano uye nzira nyowani dzinogona kugadzira nzira inoenda kuHutano kune Vese. Muchikamu che'Sainzi', vanyori vanosanganisira Carlos Alvarado Quesada, purezidhendi weRepublic yeCosta Rica, funga kuti nyika ingafambira mberi sei nezvidzidzo kubva kare uye nei hutano huchifanira kudarika miganhu. Chikamu che 'Solutions' chinotarisa kuti tingafambisira sei hutano nekuchengeta zvisikwa uye kuti sei tichifanira kukoshesa kutyisidzira kwekurwisa utachiona.
Utano: Sarudzo Yezvematongerwo enyika - Sayenzi, Solidarity, Solutions ibhuku repamutemo reGlobal Governance Project rakagadzirwa pamwe nekubatana neWorld Health Organisation. Global Governance Project chirongwa chakabatana pakati peGT Media Group, kambani inodhinda mabhuku iri muLondon, Global Governance Program yakavakirwa paUniversity yeToronto, neGlobal Health Center paGraduate Institute of International and Development Studies kuGeneva.